Yintoni Le Cheese Best Europe anikele | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Yintoni Le Cheese Best Europe anikele
Yinto engenakuphikwa kakhulu ezaziwayo-kakuhle ukuba iYurophu engcono indawo ekuyiwa kuyo sisi quality. Kwaye xa imthanda itshizi, mhlawumbi ufuna ukwazi ukuba nguwuphi na lo sisi ilungileyo eYurophu kufuneka anikele nendlela yokufumana ngayo.
Hamba kunye nathi njengoko ndigila kuluhlu zamasi eYurophu oluhle kakhulu kwakungu. Thina kudandalaziswe ukuba zeziphi iindawo elidume no ezithile. Sixoxa ukufikelela kwezi ndawo lula kwaye akuthandeki ngololiwe ukwenza itshizi yakho zaseYurophu uhambo omnye awusoze uyilibale.
Switzerland kuhlala ngaphezu 450 iintlobo samasi aphakathi sisi best Europe. Its ubutyebi bembali itshizi uza akukho namnye engalindelanga ukususela Swizalend unalo igama omhle ngokulinganayo xa kuziwa ubisi. Ngenxa eSwitzerland indumezulu yasentabeni, iinkomo zidle fresh, zengca ezihlambulukileyo. iinkomo utyani zisondliwa ukuvelisa ubisi oluninzi leyo eyenza nokuba no elimnandi kakhulu.
I Emmental omnandi nowobulali mhlawumbi enye zamasi edume Swiss. Uya kufumana abenzi Emmental original kwi Emmentaler Itshizi Factory Schaukaeserei. Switzerland naye apho uya kufumana mveliso itshizi elimnandi ezenza Igruyere, zakhiwe, Green samasi, Lebhokhwe Milk Ricotta, Bregaglia, ne Buffalo Mozzarella.
Unako yavele ukufumana zamasi zintle Swiss kuyo nayiphi na kwizixeko eSwitzerland enkulu ezifana eGeneva, Zurich, okanye Basel. Ungakwazi ukufikelela imizi entle ngololiwe kwezinye izixeko yaseYurophu ezinkulu ezifana Paris, Berlin, okanye eRoma. Ukuze eze kwiilali ezincinane adumileyo eyaziwa njengomthombo ezi zamasi emihle, ungathatha oololiwe ezimbini, omnye ukuya emzini enkulu enye ukuya kwidolophu.
Xa ucinga itshizi best iYurophu ukuba ukunikeza ngokuzenzekelayo ucinge no French, isibili Brie bukhrim kunye Camembert entle beza engqondweni. kunjalo, France kwakhona eyaziwa ngokuba Roquefort lwalo, mhlawumbi omnye no kakhulu. Lo sisi ke abo kunye incasa ezifunyenwe.
France naye ekhaya Boursin, a sisi bukhrim ukuba esimthandayo abapheki abaninzi njengoko ifaka kakuhle ibe izitya. Chèvre yenye sisi odumileyo French. Yinto itshizi kunye nobisi ibhokhwe kunye texture ukuba kuxhomekeke ubudala lo sisi; endala kuba, i acrid ngakumbi nokuphangalala uzinzo yayo. Tomme de Savoie lubisi itshizi inkomo ngokuqinileyo size ibesabubhotolo elinombala-ingaphakathi cuba brown.
Fumana ezi zamasi flavourful French ngokundwendwela izixeko zakho ozithandayo French. Thatha lo loliwe uya eParis, Lyon, Marseille, yaye eminye imizi eFransi ukususela uninzi imizi emikhulu European. Njengoko a lover itshizi, mhlawumbi ufuna ukutyelela farmhouses apho balapha wenze no. Ezi lula onokulufikelela ngokuqhubeka uhambo lwakho wakuba usidla zafikelela imizi emikhulu ngololiwe.
Amsterdam ukuya eLyon ngoLoliwe
Eyona Cheese Yurophu – ElamaTaliyane
Lo sisi kakhulu eYurophu ifumaneka ElamaTaliyane, enye enkulu abalimi sisi kwehlabathi ehlabathini. Ezinye zamasi idumileyo ehlabathini Italian. Ngubani na weva Mozzarella, Parmigiano-Reggiano, no Ricotta? Ezinye zamasi ehlabathini-lalidume ukuba bavela Italy na Gorgonzola, Mascarpone, Provolone, kunye Pecorino. Ezi zamasi aveliswa kwelo lizwe na umgangatho ophezulu asebenzise iiresiphi zemveli.
AmaTaliyane athande no zabo kakhulu ukuba sisi best eYurophu imithendeleko ziyingxenye inkcubeko yabo. Omnye imikhosi inkulu sisi ke Cheese Festival Bra in Piedmont. YeSisili igubha "Festival Of Ricotta Cheese” okanye Ricotta kunye Cheese Festival ngonyaka nganye. Head ku Tuscany ngeCawa yokuqala ngoSeptemba kubhiyozela umthendeleko Pecorino Cheese ngokutyeziswa.
Thatha uloliwe eRoma, Florence, milan, Naples, kunye nezinye iidolophu ezinkulu kukubonisa ngenxalenye lo sisi best eYurophu ngqo evela kubavelisi, Gcina A Isitimela.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cheese-europe%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / pl ukuba / fr okanye / de kwiilwimi ezininzi.
#cheese #Hlahla Food Travel travelfrance travelitaly indawo yokuhamba
Tips For Ukuhamba Ngu Uloliwe Kids EYurophu